स्वस्थानी अध्याय: ६
भविष्यवाणी नेपालमा भुकम्प जादैछ
खाना खांदा यसो टिभीको रिमोट थच्दै थिए, नेशनल जोग्राफीले सुमो रेस्लींग देखाइ रहेको रहेछ। सुमो खेल्ने खेलाडी कत्रा भने कपडा पनि सिलाएको होइन कि कछाड जस्तो बेरेको कपडा लगाउदा रहेछन। के खाने रहेछन र हो त्यती ठुला अचम्म लाग्यो। खान त एक थाल भात मैले नि खान्छु तर सुमो जत्रो ठुलो भए त कपडा नि पाइन मुस्किल हुने रहेछ।
Wrestling खेल फिल्म जस्तै हो। काठको platform मा तल माइक राखेर खेलाइन्छ जस्ले सानो आबाजलाइ पनि भयंकर आबाजमा परिणत गर्दछ। Wrestler हरु लड्दा एक जनाले हाने जस्तो गर्दछ र अर्कोले हातसंगै जिउ चलाएर कुटाइ खाएजस्तो गर्दछ। अनि पहिले नै तयार पारिएका दर्शकलाइ अभद्र ब्यबहार गरेर दर्शकलाइ उत्तेजीत गरिन्छ। यस्तै यस्तै नाटक हुन्छन wrestling मा। तर सुमो रेसलिगं भने हजारौ बर्ष पुरानो साच्चैको कुस्ती खेल हो। यसको नियम साधारण छ, कि आफ्नो प्रतीद्बन्दीलाइ पछार्नु पर्छ कि घेरा बाहिर पुराउनु पर्छ। तर यस्ता अजंघका मानिस कसरी तयार भए त? ल हेर्नुहोस केही सुमो खेलाडीको खाना?
सुमो च्याम्पियन Rikishi Takamisugi ले 65 बटुका stew खान्छन जस्मा १३ केजी त मासु मात्रै हुन्छ।
अर्का अत्यधीक तौलका Konishiki ले १० बटुका stew, ८ बटुको भात, १३० सुशी र २५ वटा बार्बिक्कयु मासु खान सक्थै।
यत्रो खान्की रहेछ यिनीहरुको, अनि त्यत्रो खाएको कता जाओस त? यो खान्की करिब २०,००० हजार क्यालोरी बराबर हुन्छ जुन एक बयस्क मान्छेले खाने भन्दा १० गुणा बढि हुन्छ भने यिनीहरुको सरदर आयु साधारण मान्छेको भन्दा १० बर्ष कम हुन्छ।
सुमोको खानपानको तरिका (Sumo Wrestlers: This is How You Get Fat)
सुमोको परम्परा (Sumo tradition)
रामचन्द्र गिरी /श्रीअस क्वालालम्पुर/
घर फर्कनलाई टिकट काट्न साहुलाई पैसा दिएको दुई हप्ता भैसक्यो, अहिले सम्म टिकटको अत्तोपत्तो छनै , चिनको मान्छे भनरे विश्वास गरे, अहिले धोका भो मलाई, फोन गर्दापनि कम्प्यूटर बोल्छ।' भिषा सकिने बेला भैसक्यो टिकट पाएका छैनन बिचरा लमजुङ्ग, भोटेओडारका कर्ण गुरुङ्ग। आफैले टिकट काट्नलाई पनि उनलाई त्यति मेसो छैन। टिकट काट्न कति पैसा लाग्छ? टिकट कहाँ पाईन्छ? भन्ने आफुलाई थाह नभएको बताउँछन् उनी। पेतालिङ्गजया स्थित एक कम्पनीमा कार्यरत गुरुङ्ग आफ्नो कार्यअवधी पुरागरी स्वदेश फकैदै छन्। मलेसियामा धेरैजसो श्रमीकहरुको यस्तै गुनासो रहेको पाईन्छ। नेपालमा थुप्रै बैङ्क खुले, देशमा रेिमटयान्स थप्ैर भित्राउन सफल रहको बङ्कैहरु र पछि पालो देश बाहिरका विभिन्न मुलुकहरुमा आयो। हाल मलेसियामा मात्रै १६ वटा नेपाली रेमिट्यान्सहरुले मलेसियन सरकारबाट सम्बन्धन प्राप्त गरिसकेका छन् । नेपाली श्रमीकहरुको निकै बाहुल्यता र हेको यहाँ विगत केही महिना देखि रेमिट्यान्स बजार निकै प्रतिस्पर्धात्मक छ।यतिखेर धेरैजसो निजी कम्पनीहरुको ध्यान देशबाहिर केन्द्रित रहेको छ चाहे त्यो बेङ्किङ क्षेत्रमा होस चाहे हवाई उडानकै क्षेत्रमा। अहिले मलेसियाको नेपाली रेमिट्यान्स कम्पनीहरु मध्येकै जेठो रेमिट्यान्स कम्पनी आई.एम.ई द्वारा संचालित एक्रस ट्राभल्स एण्ड टुर्सले हवाई उडानको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्न सफल भएको छ। यति एयरलाईन्स निजी कम्पनीद्वारा संचालित वायुसेवाले मलेसिया लगायत दुवईमा पनि आफ्नो सेवा विस्तार गरीसकेको छ। नेपाली श्रमीकहरुले भोग्नुपरेको समस्यालाई ध्यानमा राखी यो एयरलाइन्सले देश बाहिर सेवा विस्तार गरेको हो। मलेसियामा यतिको उडान थप्न सफल एक्रस ट्राभल्स एण्ड टुर्सले आई.एम.ई. रेमिटबाट पैसा पठाउने ग्राहकहरुलाई विशेष छुट दिइने तथा मंगलबार, बिहिबार र शनिबार गरी हप्ताको तिन उडान हुने जनाएको छ। श्रमीकहरुको हितलाई ध्यानमा राखी सूचना विस्तार गर्न आई.एम.ई ले आफ्नो सम्पूर्ण शाखाबाट यस सम्बन्धि सुचना तथा जानकारी प्रदान गनर्को साथ सस्ता भाडादरमा क्वालालम्परु बाट अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलसम्म जानको लागि यातायातको समेत व्यवस्था गरिने आई.एम.ई का अर्जुन शर्मा पौडेलले बताउनुभएको छ। यती एयरलाईन्सको मलेसिया सेवा विस्तारलाई यहाँ कार्यरत श्रमीकहरु स्वागतयोग्य बताउँछन्। भर्खरै नेपाल पुगी मलेसिया फकर्रे आएका विद्यार्थी शुसन अधिकारी भन्छन्–'यतीले थालेको सेवा धेरै आवश्यक तथा सान्दर्भिक छ।' तर अर्का एक नेपाली श्रमीक भने जुन एयरलाईन्सले बढी सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्छ त्यहि एयरमा जाने बताउँछन्। उनी अझ थप्दै भन्छन–'नामलले मात्र हदँनै काम पनि हुनपर्‍यो, यतीको भने हेर्न बाँकी नै छ।' जेहोस मलेसियाबाट पैसा पठाउन मात्र होईन, मान्छे ल्याउन लैजान पनि निक्कै सजिलो हुने र टिकट तथा उडान सम्बन्धि समस्याहरुबाट श्रमीकहरुले केही मात्रामा भएपनि छुटकरा पाउने चौतर्फी आशा गरिएको छ। यती एयरलाइन्सको यो सेवा विस्तारले अन्य उडान क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धात्मक मात्र होईन चुनौतीसमेत दिएको छ।
नेपाली बिद्यार्थीहरुका लागि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने गन्तब्य मध्येको एक मलेसियामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरुले अध्ययनकै क्रममा पर्ने विभिन्न समस्याको समाधानको निम्ति एकताबद्ध संगठनको खाँचो नवनियुत्तुत्तुक्त राजदुतुतुतलाई स्वागत गर्न विशेष्ेष कार्यर्त्रक्रमको तयारी रहको जिकिर गर्दै नेपाली विद्याथीर् सगं ठन, मलेसिया' गठन गरेका छन्। धिरेन्द्र कोईरालाको अध्यक्षतामा गठित सो संगठनको उपाध्यक्षमा सुनिल ढकाल, सह–सचिवमा कृष्ण कुमारी निरौला, सचिवमा प्रकाश भट्टराई, कोषाध्यक्षमा मछिन्द्र चापागाँई, सह– कोषध्यक्षमा अखिल सुवेदी, प्रकाशन तथा जनसम्पर्कमा रामचन्द्र गिरी, वेभ चेयरमा नेत्र पौडेल, र संयोजकमा राजेन्द्र श्रेष्ठ र हेका छन्। त्यसैगरी सदस्यहरुमा क्रमशः मोहित शाह, सोना थापा, जेनी, हाङ्ग लिम्बु, अभिनाष कोइराला र राधिका आलेमगर र हेका छन्, भने सल्लाहाकारहरुमा बिनोद पाण्डे र रञ्जित काउर रहेका छन्। गत बर्ष अक्टोबर २६ गते गठित सो संगठनलाई कार्यगतरुपमा थप प्रभावकारी बनाउन गत बुधबार संगठनद्धारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रस्तावित विधानउपर पुर्नअध्ययन गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिएको छ। संगठनका आगामी कार्यक्रमहरुमा यहाँस्थित अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरु साथै उनीहरु अध्ययनरत कलेजहरुको नामावली संकलन, र उनीहरुको अध्ययनको क्रममा परेका समस्याहरुको खोजी गर्ने जस्ता कार्यक्रकमहरु रहकेका छन। साथै संगठनले नवनियुक्त राजदुतलाई स्वागत गर्न आगामी फबेवु्ररी १५ तारिख एक विशेष कायर्त्र कार्यक्रकम आयाजना गर्ने भएको छ। उक्त कार्यक्रमको लागि विशेष तयारी भैर हेको बताइएको छ। बुधबार भएको छलफलमा सो संगठनका संयोजक राजेन्द्र श्रेष्ठले यहाँस्थित सबै नेपाली विद्यार्थीहरुबीच एकता कायम गरी अध्ययनका क्रममा आइपर्ने विविध समस्याहरुको समाधानका निम्ति संगठनको आवश्यकता रहेकाले संगठन सधै यसका निम्ति लागिपर्ने बताएका छन । सगं ठनमा आबद्ध हुन यहाँस्थित सम्पूर्ण नेपाली बिद्यार्थीहरुलाई आवहानसमेत गरिएको छ।
प्राबाधीक गडबडी भएको हुनाले सबै भाग फेरी अपलोड गरेको छु
सुन्नमा सम्स्या भएमा फाइल डाउनलोड गर्न यो लिन्कमा जानुहोला , यो लिन्क ३दिन सम्ममात्रै काम गर्नेछ ।
सुन्नमा सम्स्या भएमा फाइल डाउनलोड गर्न यो लिन्कमा जानुहोला, यो लिन्क ३दिन सम्ममात्रै काम गर्नेछ ।
हुन त म कुनै ज्योतिस होइन तर म के भविष्यवाणी गर्न सक्छु भने केही समय भित्र नेपालमा एउटा ठुलो भृइचालो जाने पक्का छ । यो कुनै प्राकृतिक प्रकोप को भविष्यवाणी हैन यो केवल राजनैतिक तुफानको संकेत हो । मैले सुनेको थिए पृथ्वी नारायण शाहको १३ औ पुस्तामा शाह वंसको नास हुने छ । राजा विरेन्द्रको समुल वंस नास त भयो तर शाह वंसको नास भने भएन । ज्ञानेन्द्र राजा भए, प्रजातन्त्र आयो गयो, लोक तन्त्रको नारा आयो तर नेपालको राजनैतिक समस्या झनै वढदो छ । मैले देखेको इतिहास लामो छैन । ०४६ साल पछिको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा आएको प्रजातन्त्रलाई राजाको हातमा लगेर वुझाउने काम जिम्मेवार पार्टर्ीी गरेको हो । २०६४ साल सम्म आइ पुग्दा नेपालको सवै आवरण धुजा धुजा भइ सकेकेा छ । विस्फोट हुन मात्र वाकी छ । अवको नेपाल सुडानमा परिवर्तन हुन केही समय मात्रको देरी छ । यो मेरो भविष्य वाणी हो । जाती विचको द्धन्द्धको को विउ कहिले देखि रोपिएको हो म भन्न सक्दिन तर अवस्य भन्न सक्छु अव को युद्ध जातिय आधारमा हुदैछ । वैज्ञानिक अवधारणा भलै माउवादीले देखेको होला तर मेरो विचारमा त्यो एउटा विष्फोटक पदार्थ हो जुन विष्फोटन हुन मात्र वाकी छ । संधिय राज्यको अवधारणा कति वैज्ञानिक छ । तेसको वारेमा म अज्ञानी हुला तर भर्खरै मात्र मैले हेरेको नक्सा जहा भाषिक र संधियताको आधारमा नेपाललाई विभाजन गर्न खोजिनु मेरो साधारण वुद्धीले नथापाएको पनि हुन सक्छ । हामी जहिले पनि तुलना अरु देशलाई गरि नेपालको निती निमाण गर्ने प्रयत्न गछौ तर हाम्रो आफनो धरातल कति दरो छ हामीले कहिले अध्ययन गरेको छैनौ । लिम्वुवान खसवान वा नेवारवान ले के वुभलाउने - केही समय पहिला एउटा लेख पढेको थिए नेपालमा व्रामण र क्षेत्री विचका ेद्धन्द्ध वढदै छ । लेखक नेवार भएकोले जातिय आक्षेप लागेका कमेन्ट मैले देखे । उनले कुन सोचमा त्यो लेखे मैले वुझन सकिन तर म आफु क्ष्ेात्री भएता पनि त्यो विषयमा सत्यता लुकेको देखेको छु । साचो हो जातिय सोच र राजनैतिक युद्ध यति वढेको छ कि यो वाहुन र क्ष्ेात्री मा पनि प्रवेश गरि सकेको छ ।
संधिय राज्य मधेस होस वा लिम्वुवान थारुवान होस वा खसवान धरातल नैतिकताको हो । प्रवासमा रहदा मैले धेरै सिक्न सके जसमा पहिलो त काम भनेको काम हो । एउटा रमाइलो घटना मेरो घरको ढल विग्रियो मैले जुन एजेन्ट कम्पनी वाट घर लिएको थिए तेसमा गए घर धनी संग प्रत्यक्ष सरोकार परेको थिएन । पछि एक जना आयो फोहर मैलो लुगा लगाएर ढलको सवै काम हेर्यो अनि मर्मत गर्यो कुरा गर्दा थाहा पाए घरको मालिक उ नै रहेछ । पेसाले इजिनियर रहेको उसले आफै आइ मर्मत गर्यो मैलो सोधे तिमी आफै यस्ते काम गर्न आइ रहेको छौ किन - उसले भन्यो के काम गर्दा सानो हुइन्छ र - नेपालमा सानेा कामकोलागि अरुलाई ताक्ने वानी परेको म जस्तो लाई एउटा गतिलो सवक थियो त्यो । तेस्तै कुनै पनि कार्यलयमा जादा आफनो सवै काम समयमा हुने त्यो पनि विना नास्ता खर्च दिइ के नेपालमा सम्भवछ । पानी वती टेलिफोन को विल तिर्न दिन भरि लाम लाग्नु पर्ने हाम्रो देश र वैकवाट ५ मिनेटमा सवै विल तिर्न सकने यहाको तरिका होस वा प्रोफेसरले सान संग आफनो साइकलको वर्ण्र्ाा गरेको अवस्थामा नेापलमा मोटर साइकल भन्दा कम के चढनु भन्ने प्रवृती मा परेको हामी हाम्रो नैतिक धरातल के छ ? अनि हामीले यो मस्तिष्कले सोचेको संधिय धरातल युद्धको आभास नभए के हो त ?
संविधान सभाको चुनावले देशमा शान्ती ल्याउछ भन्दै आखामा पटी लगाइर वस्ने नेपालीले यो वुझन सकेको छैन की संविधाननै सवथोक हैन । अन्तरिम संविभान त संसोधन हुने हाम्रो देशमा जस्तो सुकै सविधानको पनि कुनै औचित्य छैन म ठोकुवा गर्न सक्छु । नेपालमा संविधान सभाको चुनाव होस वा नहोस केही फरक पदैन । अखिरमा वन्ने संविधान हो त्यो कुनै अमुत हैन ।नेपालकेा लागि अचुक औषधी पनि हैन । तेसैले म फेरी ठोकुवा गर्न सक्छु नेपालमा अव जातिय सित युद्धको सुरुवात त भै सकेको छ अव साचिकै हुन वाकी छ । सवै भन्दा सक्ती साली अंग संसद पैसामा विके १० लाख सवै थोक हुन उनको लागि ।राष्ट वैक संग पैसा छैन विदेसीको मुख ताकेर पुरक वजेटको तयारी हुदैछ । चुनावको लागी आचार संहिता जारी भएर के भयो सरकार र पार्टर्ीीई लागु हुदैन ।
म फेरी पनि भविष्यवाणी गदैछु नेपालमा भुकम्प जादैछ ।